Manga sy mavo maitso mavana miloko manga sy mavo mavo mivolombolamena mivaingana mivaingana ny curtain8267, Shina manenona malefaka miloko manga sy maitso maitso maitso maitso maitso maitso matevina ny curtain8267 Manufacturers, suppliers, factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
VOAFITRA LEHIBE & FIOMPIANA PREMIUN - Akanjo fitaratra tsara ho an'ny haingon-trano, indrindra amin'ny Krismasy, Andro fisaorana. Loko marobe azo isafidianana, mety amin'ny fomba hafa. Ny lamba mihitsy dia iray amin'ireo fitaovana malaza manerantany. Miaraka amin'ny fijery kanto dia manome rivo-piainana mahafinaritra sy ahazoana aina izany. Ny fitaovana dia polyester 100%, afaka manakana ny hazavana 85% -93% sy ny taratra UV.
Namboarina tamin'ny lamba faran'izay tsara 100% Super Soft (Polyester, nampidirina). Ny ambain mainty pensilihazo pensilihazo dia mateza ary mahafinaritra ny manohina. Sakano ny tara-pahazavana 85-95% sy ny taratra UV (ny loko maizina dia miasa tsara kokoa) tsy misy sarony noho ny haitao telo tenona. Ny alokaloka maivana sy ny tabataba dia mihena ho an'ny fiainana manokana sy torimaso tsy mikorontana. Ka afaka miantoka fa tsy hanelingelina ny olona any ivelany.